Global Voices teny Malagasy » Alzeria: Fitarainana Napetraka Mahakasika Bilaogera Iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Septambra 2018 5:28 GMT 1	 · Mpanoratra Amira Al Hussaini Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Alzeria, Ejipta, Maraoka, Fahalalahàna miteny, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Zon'olombelona
“Naharay fiantsoana avy amin'ny polisy ao amin'ny faritanin'i Tlemcen  aho, mangataka ahy hiseho eo anatrehan'ny tribonaly amin'ny Sabotsy ho avy izao, noho ny fitarainana napetraky ny talen'ny raharaha ara-pivavahana ao Tlemcen, taorian'ny lahatsoratra iray navoakako tao amin'ny bilaogiko ” Ny faritanin'i Tlemcen” tamin'ny 20 Febroary lasa teo, nomeko ny lohateny hoe «Niseho tao i Tlemcen Al Sistani  ». Nangataka ny fahazoandalana tamin'ny Minisitra ity manampahefana iray ity mba ho afaka mametraka fitoriana ahy ary, tamin'ny fanomezana alàlana azy, io minisitra io no nanokatra ny làlana ho an'ireo dingana ara-pitsaràna hanenjehana ireo bilaogera”
“Tsy atahorako ny mandeha miatrika tribonaly satria aho resy lahatra fa toerana iray tsy maintsy aleha hiarovana ny zontsika ny hazomeloka. Ny mety ho ratsy dia ny mety ho fieritreretana fa hoe tsy azo kianina isika. Efa noresahako io lohahevitra io taorian'ny nandraràn'ny Talen'ny raharaha ara-pivavahana ireo Imams ( minisitry ny finoana miozolmana) tsy ho afaka haneho hevitra amin'ny fampielezampeom-bahoaka (radiom-panjakana). Tsy tsara ny mandràra ireo Imams tsy hitory an'i Allah . Aleoko kokoa aza izaho no toriany ho tsy nanimbazimba ny finoana. Araka izany, tsy mihevitra mihitsy aho hoe ny fitantanana ny raharaha ara-pivavahana no ndeha hanenjika ahy ho nanompa / nanimbazimba ny finoana tao amin'io bilaogy io. Namily ny maso ho amin-javatra hafa ry zareo satria toa masina kokoa noho ny fivavahana ireo olona ao anatin'ilay Fitantanana », hoy izy.
Mandritra izany fotoana izany, toy izay nambàrany , natokan'ilay maraokàna bilaogera, i Mohammed Saeed Hjiouij [Arabo] ny herinandron'ny 25 hatramin'ny 31 Martsa mba hiresahana ireo bilaogy arabo ankafiziny, ary natombony tamin'ny fitetezana ireo bilaogy  ankafiziny manokana .
Androany, bilaogera namana roa avy ao Ejipta no asongadiny – Ahmed  [Arabo] sy Amr Gharbeiya  [Arabo]
Ny tranonkala Sebona [Arabo] teny iray azo adika ara-bakiteny hoe “Avelao izahay”, dia nosokafana mba hanoherana ny fitoriana iray  napetrak'ilay mpitsara ejiptiana, Abdel Fattah Mourad,  mba hanivanana bilaogy sy tranonkala miisa 21 ao Ejipta, heveriny ho mampididoza ho an'ny tombontsoan'ny firenena no sady manivaiva ny filoha Hosni Moubarak .
Tafaverina ao Ejipta  i Jar Al Qamar [Arabo] , ejiptiana bilaogera iray hafa ihany koa, efa nahazo loka , taorian'ny roa herinandro nivahinianany tany Etazonia, toerana nahazoany vaovao betsaka momba ny nahafatesan'i Anna Nicole Smith  sy ny fitsaràna mandeha amin'izao fotoana momba izay hitaiza ny zanany.
“Niverina eto Ejipta aho mba hahita hoe any am-ponja i Abdulkareem  no handany ny efatra taona hoavy, ary tsy isalasalàna fa mety hihoatra an'izay, ho sazin'ny zavatra nosoratany tao amin'ny bilaoginy. Hoe nametraka fitoriana  ilay filoha teo aloha nitantana ny fitsarana mpandrava didy ao Alexandrie mba hanenjehana bilaogera hafa noho izy ireo nanivaiva ny filoha. Hoe nisy fiara miloko manga naka an.kery an'ilay bilaogera, Malek, sy hoe nisambotra indray  mpanao fihetsiketsehana ireo mpisahana ny fandriampahalemana, taorian'ny fanapahankevitr'ireo mpanao hetsipanoherana, ny polisy, izy roa e, mba hitsahatra kely aloha. Hoe misy andalana 30 manandanja nolaniana tao anatin'ny lalàm-panorenana ary misy fitsapankevibahoaka  voaomana hatao ato ho ato. Hoe dimy volana taorian'ny nanambaràna azy vao tonga taty Ejipta ilay ipod, loka azoko amin'ny maha-mpanoratra ity bilaogy ity ahy. Ary hoe voatazona any amin'ny paositry ny polisy ao Seydi Beshr lery; sy hoe tsy azoko atao ny maka azy taorian'ny nandoavako hetra 1500 livres ejiptiana, saram-pitaterana, kadoa kely ho an'ireo mpiasa sy ireo fandaniana isankarazany”, hoy izy mitantara.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/11/125772/
 Abdulsalam Baroudi : http://bilad-13.maktoobblog.com/?post=261799
 faritanin'i Tlemcen: http://en.wikipedia.org/wiki/Tlemcen_Province
 Al Sistani: http://www.answers.com/Al%20Sistani
 toy izay nambàrany: https://www.globalvoicesonline.org/2007/03/15/arabisc-sorting-through-arabic-blogs/
 ireo bilaogy: http://www.mshjiouij.com/blog/archives/122
 ankafiziny manokana: http://www.mshjiouij.com/blog/archives/121
 fitoriana iray: https://www.globalvoicesonline.org/2007/03/28/egypt-blogger-assaulted/
 Abdel Fattah Mourad,: http://arabist.net/archives/2007/03/09/urgent-lawsuit-to-be-filed-to-block-21-egyptian-blogs/
 Tafaverina ao Ejipta: http://jarelkamar.net/Cultural_Shock
 efa nahazo loka: http://www.thebobs.com/index.php?l=en&s=1152969922764209GXICJDTG-1171884203513746CDLYSPGE
 nisambotra indray: https://www.globalvoicesonline.org/2007/03/26/egypt-arrested-activists-and-bloggers-released-in-the-desert/